YouTube မှဗွီဒီယိုများနှင့်တေးဂီတများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ Gadget သတင်း
ကျနော်တို့လိုချင်သည့်အချိန်များ၏အများစုသည် ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာပစ္စည်းများရှာဖွေပါ ဝဘ်ကတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သွားလေ့ရှိသောနေရာသည်ပထမဆုံးဖြစ်သည် Youtube ကို။ ငါတို့လိုချင်ရင်ကော ကြောင်းပစ္စည်းကို download လုပ်ပါ? ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ် ဘယ်နေရာမဆိုနီးပါးကနေဗွီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမလဲ ကနေကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဒီ extension က YouTube နဲ့မကိုက်ညီဘူး ငါတို့သည်လည်းသင်တို့ကိုပြောပြပါ တေးဂီတကိုဘယ်လိုရှာဖွေနည်း၊ အင်တာနက်မှ ငါတို့လိုချင်ရင်ကော တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်လုပ်ပါ, အရည်အသွေးမြင့်ထက်ပိုမိုနှင့်အတူတူပင်နေရာအရပ်မှ?
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြသသောကိရိယာဖြင့်လွယ်ကူသည်ထက်ပိုပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိမပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်စာရင်းအမျိုးအစားရှိပါက၎င်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် ကွဲပြားခြားနားသောချုံ့အဆင့်များတွင် MP3 ဂီတကို download လုပ်ပါ (128 မှ 320 kbit / s မှ) နှင့် မတူကွဲပြားသောအရည်အသွေးများဖြင့် MP4 ရှိဗီဒီယိုများ မူရင်းဖိုင်ပေါ်မူတည်။ အခုသင်ကဘာလဲဆိုတာသိပြီ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ yout.com နှင့်ဗီဒီယို url ကူးယူပါ ငါတို့ download ချင်တယ် (တူညီသောအခြားအလားတူစာမျက်နှာများလည်းရှိသည် Youzikဗီဒီယိုလင့်ခ်၏လိပ်စာကိုကူးထည့်ပြီး Enter ကိုနှိပ်ပါ preview တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာနှင့်အတူဗီဒီယို၏။ လူသိရှင်ကြားတွေကြားမှာ၊ ဒါပေမယ့်ဒီကိရိယာကိုသုံးတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ကိုလုံးဝမထိခိုက်ဘူး၊ ခလုတ်တွေဆက်တိုက်တွေ့ရတယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ငါတို့ download လုပ်ချင်တယ် MP3, MP4 သို့မဟုတ် GIF။ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့တတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပဲ ဗွီဒီယိုမှအသံထုတ်ယူ။ ၎င်းကိုအလွယ်တကူ download လုပ်ပါ။
အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် အရည်အသွေးရွေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်aည့်သည်သုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင့်အားအနိမ့်ဆုံးတစ်ခုကိုသာရွေးချယ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် သင်မှတ်ပုံတင်လျှင် ဒါကြောင့်သင်ကလေးစားဖွယ်ထက်ပိုသောတ ဦး တည်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် 192 kbit / s အသံအရည်အသွေး။ အဆိုပါ သာလွန်အရည်အသွေးတွေ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်သာဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည် ငွေပေးချေမှုအကောင့်။ ဒါပေမယ့်အရည်အသွေးကောင်းတစ်ခုထက်ပိုပြီး အခမဲ့အကောင့်နှင့်အတူကျနော်တို့အလုံအလောက်နှင့်လုံလောက်သောရှိသည်။ ရွေးချယ်ပြီးသားအရည်အသွေးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင်ပြေမည်ဟုယူဆလျှင် download လုပ်ရန်ဖိုင်၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အနုပညာရှင်ကိုသာပြုပြင်နိုင်သည်။ ရုံ preview ကိုအောက်တွင်, အ ဆလိုက်ခလုတ် ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ် ဗီဒီယို၏အစနှင့်အဆုံး ဒါမှမဟုတ်အသံ။ သံသယမရှိဘဲအလွန်ပြီးပြည့်စုံသော tool ကို။ ရွေးချယ်စရာတွေအားလုံးကိုရွေးလိုက်ရင်၊ အောက်ခြေခလုတ်ကိုနှိပ်ပါဒေါင်းလုပ်သည်ချက်ချင်းစတင်ပါလိမ့်မည်။
သို့သော်စောင့်ပါ။ ဟေ့ Youtube လား။ သူတို့ကမတူဘူးလား ဤလိုင်းများအထက်ရှိသက်ဝင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဤနည်းနည်းလေးဖြင့်သင်ဗီဒီယို၏လိပ်စာကိုကူးယူကူးယူရန်မလိုအပ်ပါ။ ရုံ သင် Youtube ပေါ်တွင်သင် download လုပ်လိုသည့်ဗွီဒီယိုကိုဖွင့်ပါ လိပ်စာဘားတွင်၊ ube ကိုဖယ်ရှားပါ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း YouTube URL ရဲ့ - « Www.yout.com/watch.... »။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်နဲ့သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ပိုမြန်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » YouTube မှဗွီဒီယိုများနှင့်တေးဂီတများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ
?? n ‡ icris †သို့မဟုတ် ?? ဟုသူကပြောသည်
?? Ån‡ icris † o ?? ကိုပြန်ပြောမည်။